The Mitchells vs The Machines: Nhọpụta ihe nkiri ezinụlọ ọhụrụ kacha mma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » The Mitchells vs The Machines: Nhọpụta ihe nkiri ezinụlọ ọhụrụ kacha mma
A họpụtara ihe nkiri a maka onyinye ịhọpụta ndị mmadụ maka ihe nkiri EZINỤLỌ BEST, yana kpakpando talent olu nke Danny McBride, Maya Rudolph, Abbi Jacobson, na Olivia Colman dị ka PAL.
Mwepụta ihe omume akara ngosi na-eweta ụdị ntụrụndụ nke ụdị ọ bụla na ihe nkiri nkiri dị ka mmemme njikọ aka nwere oke pụrụ iche, ka ndị egwuregwu wee nwee ike gbakọta ọnụ ka ha kirie ndị ọchị ọchị, ndị egwu, ndị na-emepụta ọdịnaya, egwuregwu dị ndụ na ndị ọzọ.
Akara ngosi lekwasịrị anya n'iso ndị ngosi na-arụkọ ọrụ iji gbasaa ụdị dị iche iche na ụdị ihe nkiri sinima mmemme dị na ihe nkiri ihe nkiri.
Tiketi iji hụ The Mitchells vs The Machines na ihe nkiri nkiri dị malite Thursday, October 28 na mpaghara igbe ihe nkiri.